Madaxii barnaamijka Nukliyeerka Iran Mohsen Fakhrizadeh ayaa lagu dilay Tehran… – Hagaag.com
Madaxii barnaamijka Nukliyeerka Iran Mohsen Fakhrizadeh ayaa lagu dilay Tehran…
Posted on 27 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wasaaradda Difaaca ee Iran ayaa xaqiijisay dilka Mohsen Fakhrizadeh, oo ka mid ahaa saynisyahannada Nukliyeerka ee ugu caansan dalkaasi, weerar hubaysan, oo wasaaraddu ku tilmaamtay mid argagixiso.
Wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in saynisyahan Mohsen Fakhrizadeh uu ahaa madaxa xarunta cilmi baarista ee wasaaradda, wasiirka gaashaandhigga Amir Hatami ayaa wuxuu dilka aqoonyahanka caanka ahaa Mohsen Fakhrizadeh uu ku tilmaamay inuu muujinayo neceybka qotada dheer ee cadawgu u qabo Iran.
La Taliyaha Hogaamiyaha Iran ee Arimaha Difaaca ayaa carabka ku adkeeyay in hay’ada Sahyuuniyada ay riixeyso dagaal ballaaran oo dhan walba ah, waxayna bixin doonta qiimaha dilkaasi.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa “si adag” u cambaareysay dilka, wasiirka arrimaha dibedda Muhammad Javad Zarif wuxuu sheegay in ay jiraan calaamado halis ah oo muujinaya doorka Israa’iil ay ku leedahay dilka saynisyahankii Iran ee nukliyeerka.
Zarif wuxuu ugu baaqay wadamada Yurub inay joojiyaan wax uu ku tilmaamay siyaasada laba wejiilanimada, ayna cambaareyaan fal dambiyeedkan oo loo arko inuu yahay argagixiso dowladeed.
Dhanka kale, Taliyaha Guud ee Ilaalada Kacaanka Iiraan, Major General Hossein Salami, ayaa yiri, “Dilalka loo gaystay saynisyahannadeena nukliyeerka waa iska hor imaad cad oo looga hortagayo Iran inay hesho tikniyoolajiyadda casriga ah.”
Wakaaladda wararka Tasnim ayaa goor sii horreysay sheegtay in “argagixisadu qarxisay gaari kale,” ka hor inta aysan rasaas ku furin baabuur ay la socdeen Fakhri Zadeh iyo ilaaladiisa oo lagu gaaday meel ka baxsan caasimadda.
Warbaahinta Iiraan ayaa tilmaamtay in Fakhrizadeh uu ahaa aqoonyahanka heerka koowaad ee cilmi baarista, wuxuuna ku jiray liiska cunaqabateynta caalamiga illaa 2007. Isagoo lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyahiisa barnaamijka hubka nukliyeerka iyo gantaalada.
Iyadoo la tixraacayo aragtida Iiraan ee doorka Israa’iil ee dilka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ku warantay in xafiiska Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu ka gaabsaday inuu ka hadlo weerarka lagu bartilmaameedsaday saynisyahanka Iran ee nukliyeerka, isla mowqifkaasi waxaa qaba Pentagon-ka, sida ay sheegtay Reuters.
Waxaa xusid mudan in Mareykanka iyo Israel ay goor hore ka hadleen Zadeh iyo doorka uu ku lahaa soo saarista madaxyada qarxa laakin Tehran ayaa beenisay arrintaasi.
Saynisyahan Mohsen Fakhrizadeh waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxa “barnaamijka Nukliyeerka Iiraan”, oo Mareykanka iyo Israel ay la dagaalamayaan, waxayna raadinayaan inay ka hor istaagaan Iran inay hesho hubka Nukliyeerka, halka Tehran ay cadeyneyso inay kaliya raadineyso tamarta nukliyeerka, ee aysan aheyn hub.